हाम्रो मुलुकमा बिधमान २ १ औ शताब्दिको मानब समाज को कलङ्क लाई तपाईंले पनि लाज मानेर लेख्नु भो । हामी सबै सचेत मानब लाई यसरी नै लाज लाग्छ । हामीलाई लाज लागे झै हाम्रो सरकार र समाज का नेता भनौदा अनी बुद्दी जिबी भनौदा हरु लाई पनि लाज लागोस !
हाम्रो मुलुकमा कम्लरी प्रथालाई कानुनी रुपमा निसेध गरिए पनि गाउ-घर- दुरगम तिर यस्को जरा पूर्ण रुपमा निमिट्ट्ट्यान्न भएको छैन । जे जती राजनीतिक परिवर्तन भएको छ त्यसको अस र नकारात्मक होस् या सका रात्मक रुपले होस् त्यो शहरी क्षेत्र र सुगम क्षेत्र मा मात्रा सिमित छ किनकी हाम्रा नेताजी - राजनीतिक कार्यकर्ताहरु चुनाव ताका बाहेक अरु बेला दुरगम तिर ढिम्किदैनन ।
बसन्त जि ! तपाईंले आशा गर्नु भए झै म पनि कामना गर्छु 'यो मा घिमा गत साल कमैया - कम्लरी - ओर्गिनी बसेकाहरुले पुन यो साल मा नबिकरण गर्नु नपरोस !
मुलुकको कानून सरकार मार्फत ति दुरगम सम्म चिहाउन पुगोस ।
मेरो बिचारमा यो प्रथालाई कसैले पनि राम्रो मान्दैन। भलै कसैले तर्क गर्ने गर्छन् कि-हामिले काम नदिएको भय यिनिहरु(कमैया, कम्लरी र ओर्गिनि)। यसको सम्पुर्ण दोश सरकारले लिनु पर्छ। कसैको कमजोरी, चाहे त्यो गरिबिको रुपमा होस वा अशिक्षा रुपमा,को कारणले नाजायज फाइदा कसैले लिन्छ भने त्यसको जिम्बेवार सरकार हुनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हाम्रो तिर प्राय सबैको (अलि पढेलेखेको र खान लाउन पुग्ने) को घरमा कमैया, भैसी वा गाई हेर्ने गोठालो वा घरमा काम गर्ने-कम्लरी हुन्थे। त्यसो गर्नलाई जमिन्दार नै हुन पर्थेन।
कसैकसैले मानबिय ब्यवहार गर्थे। तर त्यो ब्यक्तिगत कुरा भयो। समग्रमा यो कु-प्रथा नै थियो। अब यो त धेरै कम भैसकेको छ। लगभग ९८% मेरो अनुमानमा। सम्पुर्ण गरिबहरुको बारेमा सरकारले गम्भिर रुपमा सोच्नु नै पर्छ। चाहे ती कमैया परिवार हुन वा अन्य।
आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनसंगै यस्ता कुराहरु बिलाउनेछन, यहि कामना गरौं सरकार र सभ्यता नभएको देशमा !
सरकार छैन भन्ने कुरामा त धेरैले सहमति जनौलान तर सभ्यता नभएको भन्न अलि मिलेनकि?